Axmad Madoobe “ 20 Million oo Doller xitaa kuma dooranayo Kursigeyga” – Somali Top News
Axmad Madoobe “ 20 Million oo Doller xitaa kuma dooranayo Kursigeyga”
March 14, 2019 March 14, 2019 Somali Top News	0 Comments
Kulan xasaasi ah oo alabaabada u xirnaa ayaa Xalay ilaa maanta wuxuu Magaalada Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland ku dhex maray Axmed Madoobe, Fahad Yaasiin iyo Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kulanka oo ahaa mid aad u kulul ayaa sida aan xogta ku helnay waxaa markii hore si gaar ah u bilaabay Axmed Madoobe iyo Fahad Yaasiin, inkastoo markii dambe lagama maarmaan ay noqotay in lagu soo daro Xasan Cali Kheyre
Axmed Madoobe ayaa dowladda Soomaaliya ugu horeynba shuruud adag uga dhigay inaysan faragelin ku sameyn doorashada maamulka Jubbaland oo dhawaan dhici doonto.
Fahad iyo Kheyre ayaa dhawr jeer ka dalbaday Axmed Madoobe inuu doorashada isaga tanaasulo oo uu qaato lacag dhan 3 Million oo doller sida ay inoo xaqiijiyeen mas’uuliyiin katirsan maamulka Jubbaland.
Axmad Madoobe ayaa arintaasi diiday waxaana ay hadane ka codsadeen in uu ka dhigo doorashada mid fur furan oo madax banaan isla markaasna ay goob joog ka ahaato Dowladda Federaalka Soomaaliya balse Axmed oo ah nin aad u adag ayaa ku adkeystay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin damaciisa ku aadan inuu difaacdo kursiga uu ku fadhiyo ee Jubbaland.
Axmad Madoobe ayaa laga soo xigtay in uu yiri “20 Million oo dollar xitaa hadaa sii saan kama harayo doorashada iyo kursigeyga”
Ugu dambeyntii kulamadii saakay waxey labada dhinac isku raaceen in Axmed Madoobe loo madax banaaneyno doorashada ka dhici doonto Jubbaland inkastoo ay mar kasta wax is badali karaan.
Tan iyo markii ay dhacday Doorashadii Maamulka Koonfur Galbeed oo ay hareereysay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayey taas keentay inuu Axmed Madoobe xirto difaac adag oo uu ku doonayo inaysan doorashada Jubbaland noqon sida middii Koonfur Galbeed.
Axmed Madoobe ayaa ah hoggaamiyaha ugu adag madaxda Maamul Goboleedyada, wuxuuna isticmaalaa awood ciidan isagoo dhawr jeer garoonka Diyaaradaha kasoo celiyey qaarna ku xiray shakhsiyaad ay dowladda u magacowday xilal Ciidan.
Dowladda Soomaaliya ayaa olole xooggan u gashay doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo Puntland, waxayna ku guuleysatay mid kamid ah oo ah Koonfur Galbeed halka midda kale looga adkaaday, waxayna hadda loolan adag ugu jirtaa sidii ay gacanta ugu soo dhigi laheyd Jubbaland.
← Iran to export over 14,000 tons of cement to Somalia
Shirka jiheynta maamulka Puntland oo maanta lasoo gaba gabeynayo →
Kenya oo shuruudo waa weyn ku xirtay xalinta khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya
Xil. Mahad Salaad oo kashifay qorshe halis ah oo Farmaajo uu wado
March 14, 2020 March 14, 2020 Somali Top News 0
October 24, 2019 Somali Top News 0